Okuhle, Okukhulu, nokwesabekayo ngobuhlakani bokufakelwa | Martech Zone
Lapho ngikhishwa ngokuhloniphekile eMbuthweni Wezempi ngo-1992, kwakuyisikhathi esifanele. Ngaya kosebenzela iVirginian-Pilot eNorfolk, eVirginia - inkampani eyamukela ngokuphelele i-IT Innovation njengengxenye yamasu ayo ayisisekelo. Sifake i-fiber futhi sakhipha i-line-of-site satellite, salawula izintambo ezisebenza kanzima kuma-PC futhi sathatha imininingwane esisize ukuthi silungise kahle isondlo sethu nge-Intranet, futhi inkampani yabazali, iLandmark Communications, ibivele isitshala imali kakhulu ukuthola amaphephandaba online. Bengazi ukuthi iWebhu ibiyinto eshintsha impilo kimi.
Futhi eminyakeni emibili nje ngaphambili, USim Tim Berners-Lee wakhe wonke amathuluzi adingekayo kwiWebhu esebenzayo, kufaka phakathi Isidlulisilwazi se-HyperText Transfer Protocol (HTTP), Ulimi lwe-HyperText Markup (HTML), isiphequluli sokuqala seWebhu, esokuqala Isoftware ye-HTTP, iseva yokuqala yewebhu, kanye amakhasi okuqala eWebhu lokho kuchaze iphrojekthi uqobo. Ibhizinisi lami nomsebenzi wami ngokoqobo konke kwaqala ngenxa yemisebenzi yakhe emisha, futhi ngangihlale ngifuna ukumbona ekhuluma mathupha.
Iminyaka engama-25 Kamuva kanye Noguquko lwe-IT
UMark Schaefer ungimeme ukuba ngijoyine Izinkanyiso - Ukukhuluma Nezingqondo Ezikhanyise Kakhulu Kwezobuchwepheshe, iDell podcast enikeza ukuqonda okukhulu kubaholi abangaphansi kwezinkampani ezintsha kakhulu emhlabeni. Ngenkathi ngazi uDell njengenkampani ethengisa amadesktophu nama-laptops kubathengi namaseva emabhizinisini - angikaze ngibe nokuqonda ngohlelo lwemvelo jikelele lweDell Technologies kuze kufike leli thuba. Kube wuhambo oluhehayo - kusuka ekusebenzeni noMark engimhlonipha kakhulu - nokuthola ukuqonda ngekusasa lapho ngixoxa nobuholi bukaDell.
Okuningi kulokho kamuva!
Njengengxenye yalolu hlelo, samenywa ukuba sibe khona UDell EMC Umhlaba eLas Vegas (lapho ngibhala khona lokhu etafuleni lami lamahhotela). Sithole, kungekudala, ukuthi uBerners-Lee uzobe ekhuluma Ukuhlakanipha okungekhona okwangempela. "Giddy" ukuphela kwegama elifanele ukusetshenziselwa ukuchaza injabulo yami. Ngicabanga ukuthi uMark waze wangitshela ukuthi ngehlise umoya ngesinye isikhathi. Qiniseka ukuthi uyaphuma Imicabango kaMark kule nkulumo futhi!
USir Tim Berners-Lee ku-Artificial Intelligence
Ulayini wenkulumo osongwe cishe uhhafu we-Sands Expo futhi ngangibonga ukuthi uMark ubambe indawo kulayini njengoba ngaphuthuma ngakha imishini kusuka ekurekhodweni kwethu kwakamuva. Sahlala phansi, uMark wasithwebula isithombe sami ngenhla… woohoo! Ngemuva kwemizuzu embalwa uSir Tim weza esiteji waqala ingxoxo. Wabelana ngothando lwakhe lokuqala ngo-Isaac Asimov no-Arther C. Clarke, ababhali ababili ubaba wami ongasekho owangazisa ngabo ngisemncane (kanye neStar Trek, kunjalo!). Eminyakeni eyi-16 yami enkulu, kwakusathokozisa ukucabanga ngokufana kwezimpilo zethu - yize ngazi ukuthi angisoze ngaboshwa. Yebo, sengathi lokho bekuwukuphela komehluko.
UBerners-Lee wazisa wonke umuntu ukuthi wayengesona isazi se-AI, kepha wayenemicabango ethile maqondana nezinzuzo nokwesaba laphaya. Izinguquko ezizoqhamuka ku-AI zicishe zingafinyeleleki kuleli qophelo, kepha akekho noyedwa ophikisana namathuba noma izinzuzo ezingapheli esintwini.
As I-DellEMC ithuthukisa ubuchwepheshe bayo, ngokwesibonelo, ukuhlangana kwe-hyper ne-AI sekuvele kuseduze - amasistimu akhulisa ukusebenzisa ikhompiyutha, ukugcinwa kanye nenethiwekhi ngokukhaliphile njengoba izinkampani zidinga lokho. Ukwehliswa kokuhlanganiswa okukhulu, amasistimu ahlukene, kanye nephutha lomuntu kuzosiza izinkampani eziningi ukufinyelela qalisa isivinini, igama elizwakale kaningi emcimbini.
UBerners-Lee uxoxe ngentuthuko yomphakathi efinyelelekayo ezosiza ukunciphisa imfucuza, kwandise ukusebenza kahle, kanye nentuthuko yomphakathi jikelele esintwini.
Cabanga nje ngalokhu ngombono webhizinisi, ube nezinhlelo zezezimali ezingaqagela, zincome, noma zilungise ngokuya ngempilo yakho yezezimali. Noma izinhlelo zabasebenzi ezakha izinhlelo zokukhuthaza ezenziwe ngezifiso zabasebenzi. Noma izinhlelo zezolimo ezandisa ukusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane noma amanzi ngamandla ngaphandle kokuthi wazise umlimi. Noma izinkampani zobuchwepheshe ezingakala futhi zithuthukise ingqalasizinda kanye nokuhlangenwe nakho komsebenzisi ngaphandle kwesidingo sokwakha izinhlelo zomkhiqizo, amaqembu okugxila kuwo, noma ukuhlolwa.
Noma-ke, ukumaketha ubuhlakani bokuzenzela obenza ulimi lube ngokwakho, okunikezwayo, abanamadlozi, neziteshi ukwenza ngezifiso nokuheha lokho okulindelwe! Hewu!
Kuthiwani ngeSkynet nobunye?
The ubuningi kuwumbono wokuthi ukusungulwa kobuhlakani bokufakelwa kuzoshukumisa ngokuzumayo ukukhula kwezobuchwepheshe okubalekayo, okuholele kuzinguquko ezingenakulinganiswa empucukweni yabantu.
Ngamanye amagama, kwenzekani lapho amasistimu enza amasistimu angaphezu kwamandla ethu okuwaqonda? Izinganekwane zesayensi zivame ukukuchaza lokhu njengeTerminator, lapho ubuchwepheshe bunquma khona ubuntu obungenasidingo futhi busibhubhise. Umbono kaBerners-Lee awunalo udlame kepha usaphakamisa ukukhathazeka okukhulu. Enye yezingqinamba axoxe ngazo ukuthi amarobhothi awanazo futhi ngeke abe nazo amalungelo. Futhi abaholi kwezebhizinisi nakuhulumeni kuzofanele benze izilawuli eziyinkimbinkimbi ngaphezulu Imithetho Emithathu ka-Isaac Asimov.
Masibeke eceleni izikhali ze-robotic ezihlakaniphile esevele zephula umthetho # 1. Inkinga, njengoba kuchazwe nguBerners-Lee ukuthi amarobhothi akuyona inkinga yangempela - ukuhlakanipha okungekhona okwangempela kuyinto. Izinkampani kukhona ubuchwepheshe futhi bonke bazosebenzisa i-AI ukusiza ngazo zonke izici zebhizinisi labo. UMark uvame ukwaba iPizza kaDomino njengesibonelo. Ingabe inkampani ye-pizza enobuchwepheshe? Noma ngabe a inkampani yezobuchwepheshe eyakhelwe ukuletha i-pizza? Kungcono kakhulu namuhla.
Futhi inkinga? Izinkampani do unamalungelo; ngakho-ke, ubuchwepheshe babo babe amalungelo okuzalwa. Futhi ngommeleli, ubuhlakani bokuzenzela obukhiqizwa yile nkampani buzoba namalungelo. Lokho kuyi-conundrum impela edinga ukuxoxwa njengoba ubuhlakani bokufakelwa busheshisa ukuthandwa nokusetshenziswa. Cabanga inkampani enkulu, ngokwesibonelo, enesiteji esisebenzisa ubuhlakani bokufakelwa ukudala okuthile okuzuzisa abaninimasheya abo - kepha lokho kuyalimaza isintu. Akuwona amarobhothi okudingeka sikhathazeke ngawo, ubuhlakani bokufakelwa obungenazo izilawuli zokuqinisekisa ukuphepha nokuvikeleka kwethu.
UBerners-Lee ucabanga ukuthi ubuningi bungaba yiqiniso eminyakeni engama-50. Uphinde wathi ngokungangabazeki ukuthi ngeyakhe okunengqondo umbono wokuthi i-AI izodlula ukuhlakanipha komuntu. Siphila ezikhathini ezimangalisayo! Angikholwa ukuthi uBerners-Lee wethukile futhi wesaba leli kusasa - uvele wathi izinkampani, ohulumeni, ngisho nababali bezindaba eziqanjiwe zesayensi badinga ukuxoxa ngalezi zinkinga kakhulu uma sinethemba lokuqinisekisa ukuthi ikusasa lethu liphephile.
Ukudalulwa: UDell ukhokhele zonke izindleko zami zokuya eDell EMC World futhi uyiklayenti lami le- Izinkanyiso i-podcast. Qiniseka ukuthi uyangena futhi usibuyekeze, sifuna impendulo yakho!
Tags: aiBerners-leeKuhlanganaDelldell emcdell emc umhlabaukuhlangana kwe-hyperlas vegasizinkanyisoUMark Schaeferi-tim berners-lee